Covid-19 – Shwe Sar
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး အထိုးခံပြီး တဲ့ မြန်မာ ဆရာဝန်တဦး ပြောပြတဲ့ ကာကွယ်ဆေး အကြောင်း
By Shwe SarPosted on December 25, 2020
ကာကွယ်ဆေး ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ ဘယ်သူတွေ ထိုးနိုင်လဲ။ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ ဆိုတာကို မြန်မာလို အတိုချုပ် ဘာသာပြန်ရေးသား လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ (၁) ဆေးအာနိသင် ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ? Pfizer ကာကွယ်ဆေးက ကိုဗစ်−၁၉ ကို တားဆီးနိုင်စွမ်း […]
နာမည်ကြီး မင်းသား မြင့်မြင့် ရဲ့ အဖေ တက်စီမောင်း ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း
By Shwe SarPosted on December 21, 2020
ပရိသတ်ကြီးရေ သဘာဝမင်းသား လို့ပရိသတ်တွေ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ မင်းသားချော မြင့်မြတ်ကတော့ သာယာပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေး ကို တည်ထောင် ထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ အားကျ ချစ်ခင်ရတဲ့ သူလေးဖြစ်ပါတယ် သူဟာကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုလည်း အပီအပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူလေးဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကြီးကိုလည်း ရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါနော်။ မြင့်မြတ်ဟာ […]
ရောဂါလက္ခဏာမရှိတဲ့ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာတွေကို နေအိမ်မှာပဲ သီးခြားထားရှိပြီး ဗီဒီယိုကောလ် စနစ်နဲ့ ပုံမှန်ဆက်သွယ်ကာ ရောဂါအခြေအနေ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမယ့်အစီအစဉ်ကို ရန်ကုန် တိုင်း မှာ စတင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေ ဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ (၁၅) ရက်က ပြုလုပ်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက […]
၂၀၂၁ ဧပြီလ ရောက်ရင် မြန်မာပြည် ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မယ် ဆိုတာ တကယ်လား? (ကာကွယ်ဆေးတွေ ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ)
ကာကွယ်ဆေးသတင်းတွေက အားရစရာကြီး.. COVAX ကနေ ၂၀ % ရမယ်ဆိုတာကြီးကို အရင်ပြောရအောင် COVAX မှာ နိုင်ငံ ၁၈၀ ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထွက်လာရင် နိုင်ငံ ၁၈၀ ကို ခွဲတမ်းနဲ့ မျှပေးရမှာ။ လက်ရှိအ […]
“ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် သံသယဖြစ်ပြီ ဆိုရင် ဒါလေးတွေ ကျိန်းသေလုပ်ပါ ”(အများသိအောင် မျှ‌ဝေပေးပါအုံး …)
By Shwe SarPosted on December 15, 2020
(day 1) ခေါင်းတွေ ထိုးကိုက်ပါတယ် ပေါက်ကွဲ မတတ် (day 2) လည်ချောင်း မှာ ယားပြီး ချောင်းခြောက်ဆိုး ချင်လာ ပါတယ် (day3) အနံ့တဖြေးဖြေးလွင့်လာပါတယ် လုံးဝမပျောက်သွားသေးပါဘူး (day 4) ကိုယ်စားတဲ့ […]
Mask နှင့် Face Shield စနစ်တကျ တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိသော ဈေးရောင်းသူများထံမှ ပစ္စည်းများ နှင့် အစား အသောက်များ ဝယ်ယူခြင်း မပြုရန် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန တိုက်တွန်း
By Shwe SarPosted on December 11, 2020
Mask နှင့် Face Shield စနစ်တကျတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသော ဈေးရောင်းသူများထံမှ ပစ္စည်းများနှင့် အစား အသောက်များ ဝယ်ယူခြင်းမပြုရန် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ တို က်တွ န်းချက်တစ်စောင်ကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါနှိုးဆော်စာတွင် ဈေးရောင်းသူအချို့သည် ပါးစပ်နှင့် […]
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ကူးစက် ပြန့်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ အမျိုးအစားဟာ တခြားနေရာတွေ မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးအစားနဲ့ မတူတဲ့အပြင် ကူးစက်သူ လူနာတွေကို နောက်ကြောင်းပြန်လိုက်ဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့စနစ် ရှိ မနေ တာကြောင့် ရောဂါပိုးကူးစက် မြန်ဆန်နေတာလို့ […]
မြန်မာတွေ မျှော်နေ တဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဂယက်များ
By Shwe SarPosted on December 10, 2020
နိုင်ငံ လူဦး၏ ၂၀ ရာနှုန်း အတွက် လုံလောက်မည့် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို လာမည့် နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာကျန်း မာရေး အဖွဲ့၏ COVAX အစီအစဉ် ဖြင့် ရရှိနိုင်မည်ဟု ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး […]
မြန်မာပြည် အနေနဲ့ ကိုဗစ်ဆူနာမီ လှိုင်းလုံးကြီးကို ရင်ဆိုင်နေရပြီ ဟု ပညာရှင်များ ပြောကြား
By Shwe SarPosted on December 7, 2020
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်မှုက ဆူနာမီ လှိုင်းလုံးကြီးသဖွယ်ဖြစ်နေပြီး နေ့စဉ် လူနာအသစ် တစ်ထောင်ကျော် တိုးနေမှုကြောင့် ဆေးရုံတွေ၊ဆေးခန်းတွေနဲ့ ကိုဗစ်စင်တာတွေမှာ မနို င်မ နင်းဖြစ်နေပြီလို့ သွေးရည်ကြည်နဲ့ ကိုဗစ်လူနာများကို ကုသရေးအကြံပေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာရဲမြက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ […]
အနံ့ပျောက် သူများ အနံ့ပြန်ရ ခဲ့ရင် အခြားသူကို မကူးနိုင်ဘူး ဆိုတာ . .
ယခု ရန်ကုန်တိုင်းမှာ အနံ့ ရုတ်တရ က်ပျောက် လူနာတွေ များလာပါတယ်။ ကျနော့် ကိုယ်ပိုင်အမြင်အရ ကိုဗစ် ဘယ်လောက်ဆက်ပြီး ပျံ့မလဲဆိုတာက အနံ့ပျောက်လူနာတွေအနေနဲ့ အခြား သူဆီမကူးအောင် ဘယ်လောက်နေနိုင်လဲအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ အနံ့ပျောက်ပြီးဆိုရင် […]